ဆီးချိုရောဂါရှိရင် မိသားစုဝင်တွေစားသလို စားနိုင်သလား – Healthy Life Journal
ဆီးချိုရောဂါရှိရင် မိသားစုဝင်တွေစားသလို စားနိုင်သလား
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။
မေး။ . ကျွန်မအမေဆီးချိုရောဂါရှိနေတယ်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမှသိရပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မတို့ က အမေ့အတွက်စိတ်ပူလို့ အစာကို အချိုမပါတာ သက်သက ်စီမံပေးတယ်။ အမေက ကျွန်မတို့စားသလိုပဲစားချင်နေတယ်။ အမေကကျွန်မတို့ မိသားစုဝင်တွေစားတဲ့အစာကို စားနိုင်ပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။ . ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေအတွက် သီးသန့်အစာဆိုတာမရှိပါဘူး။ မိသားစုအတွက် ပြင်ဆင်ချက် ပြုတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစာတွေကို အချိုကလွဲရင် မိသားစုနဲ့အတူ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Dietအစာဆိုတာ အဝလွန်ကဲသူတွေဆက်မဝအောင် ကယ်လိုရီဓာတ်မများစေဖို့ စီမံထားတာဖြစ်ပြီး ဆီး ချိုရောဂါရှိသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်စွာစားနိုင် တယ်လို့ လွဲမှားပြီးမယူဆသင့်ပါဘူး။ အစာကိုဆေး အဖြစ်ယူဆပြီး ဆေးကိုအချိန်မှန်မှီဝဲသလို အစာကိုအချိန်မှန်စားသောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းသ ကြားဓာတ ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆီးချိုရောဂါကုသောက်ဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းထိုးဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အစာကိုအချိန်ကိုက်စားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိကစားသုံးတဲ့ မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာနဲ့ ညစာတွေမှာ ကစီဓာတ်ကမဖြစ်မနေပါဝင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။သတိထားရမယ့်အချက်က နေ့တိုင်းစားတဲ့အစာ စားချိန်နဲ့ အစာပမာဏတွေကို အဖြစ်နိုင်ဆုံးတူအောင်စား သုံးသင့်ပါတယ်။ဆီးချိုရောဂါက တစ်သက်လုံးရှိနေမယ့်ရောဂါဖြစ်လို့ ကိုယ်နေ့စဉ်စားတဲ့ပုံစံက တစ်သက်လုံးလိုက်နာနိုင်မယ့် အစာပုံစံဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာတွေကို သဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စားပေးသင့်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါရှင်တွေက ကစီဓာတ်၊ အသားဓာတ်နဲ့ အဆီဓာတ်တွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ ကစီဓာတ် ဆိုတာ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အစာတွေ(ဥပမာ- ထမင်း၊ ဆန်ပြုတ်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်တီ၊ နန်းကြီးသုပ်၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ၊ ကောက်ညင်း၊ ဆီထမင်း၊ မြူစွမ်)၊ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစာတွေ (ဥပမာ-ဂျုံခေါက်ဆွဲ၊ဂျုံကြာဇံ၊ ချာပါတီ၊ ပေါင်မုန့်၊ နံပြား၊ပလာတာ) စတာတွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ အသားဓာတ်အနေနဲ့ ငါးအမျိုးမျိုး၊ အ ဆီမပါတဲ့ အမဲသား၊ အဆီမပါတဲ့ ဆိတ်သား၊ အရေခွံမပါတဲ့ ဘဲသား၊ ခေါင်းမပါတဲ့ ပုစွန်၊ ဝက်သား(အသား သက်သက်)နဲ့ အရေခွံမပါတဲ့ ကြက်သားတွေကို စားနိုင်ပါတယ်။
အဆီဓာတ်မှာ ကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ဖြစ်ဖို့ ပဲဆီ၊ နေကြာဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ သံလွင်ဆီနဲ့ ငါးကရတဲ့ အဆီတွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ မစားသင့်တဲ့အစာထဲ မှာ ပြည့်ဝဆီတွေကို မစားသင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လျှော့စားပါ။ ပြည့်ဝဆီ ဆိုတာက အခန်းအပူချိန်မှာခဲသွားတဲ့ အဆီတွေကို အကြမ်းအားဖြင့်ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အမဲဆီ၊ ဝက်ဆီ၊ စားအုန်းဆီ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်နေသူတွေက အသားဓာတ်ကို လျှော့စားသင့်ပါတယ်။
Related Items:Diabetes, Diet, Healthy Life